Nhau - China Iron uye Simbi Sangano: Gadziridza chimiro chezvinhu zvekutumira kunze uye nekunatsiridza iyo yekunze uye yekunze mitero yezvinhu zvesimbi zvigadzirwa zvemunyika yangu.
China Iron uye Simbi Sangano: Gadziridza chimiro chezvinhu zvekutumira kunze uye nekunatsiridza iyo yekunze uye kutumira kunze mitero yezvinhu zvesimbi zvigadzirwa zvemunyika yangu
Kuti upe mutambo uri nani kuchinangwa chekushandira indasitiri yesimbi uye nhengo dzemakambani eDare anoshanda, uye kubatsira shanduko yeindasitiri nekuvandudza uye kusimudzira kwemhando yepamusoro, musi waMay 19, China Iron and Steel Industry Association Market uye Nhengo Yekugadzirisa uye Yekunze Export Coordination Committee yemusangano yakaitirwa muShanghai Yakadaidzwa
Vatungamiriri vanoremekedzwa vanobva kuTrade Remedy Bureau veMinistry of Commerce vakapinda musangano uyu. Iron uye simbi yekugadzira mabhizinesi akadai seBaowu, Anshan Iron uye Simbi, Shagang, Shougang, Hegang, Benxi Iron uye Simbi, Baotou Iron uye Simbi, Japan Simbi, Yonggang uye mamwe mabhizinesi esimbi nesimbi ekugadzira aive anotarisira kupinza nekutengesa kunze kwenyika uye yakakosha simbi uye mamwe maindasitiri masangano. Uye vanopfuura makumi manomwe vamiriri vakapinda musangano uyu.
Baosteel General Manager Sheng Genghong akapa hurukuro yekutambira. Akaratidza kuti nyika nhasi iri kuita shanduko huru isingaonekwe muzana ramakore. Iyo indasitiri yesimbi ine zvese mikana nematambudziko. Iri ibasa resimbi indasitiri kubata iyo nyowani yekuvandudza nhanho, kushandisa idzva pfungwa dzekuvandudza, kuvaka nyowani yekuvandudza pateni, uye kuchengetedza kushanda kwakanaka kweketani yeindasitiri.
Musangano uyu wakavhota ndokupasisa yakadzokororwa "yeKushanda Mitemo yeChina Iron uye Simbi Association Musika uye Kunze uye Export Coordination Committee", uye nhengo dzakasarudzwa dzechikamu chechina cheMarket uye Kunze uye Export Coordination Committee, kusanganisira sachigaro, vatevedzeri vevatungamiriri, uye secretary secretary. . Sheng Genghong, maneja mukuru weBaosteel Co., Ltd. weBaowu Group, akasarudzwa sachigaro weMarket uye Import uye Export Coordination Committee.
Sheng Genghong akaita mushumo webasa akamiririra komiti, akaongorora nekupfupisa iro basa hombe uye zvakaitwa nekomiti yapfuura, uye akaongorora mamiriro azvino uye matambudziko aripo emusika wesimbi wekunze nekutengesa kunze. Akasimbisa kuti komiti inoshanda inofanirwa kupa kutamba kwakazara kune chinzvimbo chemakambani enhengo mudanho rinotevera, kusimbisa kuchinjana nekugovana ruzivo rwakakwana rwemaindasitiri senge maindasitiri marongero nemaitiro, kuvandudza kugona kushandira nhengo, uye kuratidza nenguva zvinodiwa nhengo dzemakambani; kubatsira nhengo dzemakambani kugadzirisa chimiro chezvinhu zvekutengesa kunze uye kusimbisa musika. Kukwikwidza; Ipa rutsigiro kumakambani emitezo kuti agadzirise marongero ekutengeserana kwekunze uye kugadzirisa maratidziro ekushambadzira nenzira yakakodzera shingairira kupindura kune "Belt uye Road" chirongwa uye shandisa mushe mukana wekusaina uye kupinda mukushanda kwe "RCEP Chibvumirano" kuenderera mberi nekuvandudza misika iri kubuda; pamwe chete chengetedza musika une hutano uye wakarongeka Kurongeka uye zvido zvemakambani enhengo.
Luo Tiejun, mutevedzeri wasachigaro we Iron and Steel Association, vakapinda musangano uyu. Mukutaura kwake, akakorokotedza vatungamiriri vachangosarudzwa, vatevedzeri vevatungamiriri uye munyori mukuru wekomiti inoshanda, uye akasimbisa kubudirira kwebasa rekomiti. Akataura kuti matareji ehunyanzvi anogona kubatsira kuvhara hukama pakati pemabhizinesi nemasangano, uye kubatsira kuwana nekugadzirisa matambudziko ezvemabhizimusi zvinonetsa nenguva. Inosanganisira iyo misimboti yekuvimba nemabhizinesi, kuvimba nenhengo, uye mabhizinesi ekumhanyisa masangano. Ndiro basa riri nani resangano kunhengo, Muindasitiri yebasa, basa rakakosha remubatanidzwa sebhiriji uye chinongedzo pakati pehurumende nenhengo dzayo zvinogona kuitirwa zvirinani.
Luo Tiejun akasimbisa kuti nekuwedzera kwesimbi yekugadzira sosi uye bhizinesi vhoriyamu, zviwanikwa zvesimba uye kumanikidzwa kwezvakatipoteredza zvakawedzera uye zvakanyanya kuumba zvipingamupinyi zvakakura pasimba remangwana reChina simbi, uye zvakakanganisa huwandu, hwakasiyana uye chimiro chesimbi inopinzwa kunze. uye kunze kwenyika. pesvedzero. Kutarisana nemamiriro ezvinhu matsva nekuwedzera kudiwa kwemusika, zvipingamupinyi pane zviwanikwa uye nharaunda, nezvinodiwa mukusimudzirwa kwegirini, basa rekomiti rine nzira refu yekufamba uye rizere nematambudziko matsva. Kune inotevera nhanho yedare rebasa, akaisa pamberi chaipo zvinodiwa: chekutanga, makambani makuru anofanirwa kutora chinzvimbo chinotungamira, kutora matanho anoshanda, uye nekunyatsoita basa rekomiti; chechipiri, simbisa kuzvidzora, uye kutevedzera mitemo nemirawu yekusimudzira kugadzikana kwemusika uye hutano; chechitatu, kuronga kwese. Ita kurongeka kwemitero zvinhu uye kusimudzira kuburitsa kunze kwenyika kwakakosha-kuwedzerwa zvigadzirwa; chechina, nyatsoteerera kufambira mberi kweEU "kabhoni muganho wekugadzirisa mashandiro", uye dzidza zvinoitika zvemabhabhoni emitero nekukurumidza; chechishanu, bata hukama pakati pemishonga yekutengesa uye nekuvandudza kukwikwidza kwekambani, uye kusimudzira simbi yekunze kutengeserana Yakakwira-mhando kusimudzira.
Pamusangano wakakosha wakatevera, Mutevedzeri Commissioner Lu Jiang weTrade Remedy Bureau ye Ministry of Commerce, Hu Wei, wechipiri-wechipiri muongorori weDhipatimendi reInternational Ministry of Commerce, uye Jiang Li, muongorori mukuru we Iron and Steel. Sangano, rakateedzana rakakurukura mamiriro ese uye kurudziro yebasa yakatarisana nebasa rekugadzirisa remunyika yangu, uye RCEP Yakaunza nekuongorora mikana mitsva yeChina indasitiri yesimbi, maonero emusika wesimbi wepasi rose, uye kukanganisa kweChina simbi inopinzwa kunze kwenyika.
Pamusangano wehurukuro wakaitwa masikati, vatori vechikamu vakakurukura uye nekuchinjana maonero pamusoro pekukanganisa uye kupindurwa kwekubviswa kwemitero yemitero yekunze kwenyika, mamiriro ekutengesa simbi uye tarisiro yemusika wekunze kwenyika, uye ruzivo uye mazano ekubata nekukonana kwevatengesi. Vatori vechikamu vakabvumirana kuti kupatsanurwa kwezvinhu zvemutero ibasa rakakosha uye rinosvika kure. Izvo zvinodikanwa kuti uongorore zvakadzama mamiriro ekunze ekushambadzira emhando yepamusoro-simbi zvigadzirwa, enzanisa zvinhu zvemitero zvigadziriso zvezvigadzirwa zvesimbi munyika dzakasimukira, uye zvakarongeka rongedza kugadzirisa nyika yangu zvichibva pane zvimiro zvemuviri nemakemikari zvigadzirwa. Zano rekupinza uye kutumira kunze mitero yesimbi uye zvigadzirwa zvesimbi, uye pachinhu ichi, zvinopa kurudziro kumatare ehurumende akakodzera. Vatori vechikamu vanoisawo pamberi tariro uye mazano ebasa remangwana rekomiti uye nesangano.